Emotionally Mature – JQY's Blog
မင်းဘယ်အချိန်မှာ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာရင့်ကျက်မှုရှိလာပြီလို့ သိနိုင်ပြီလဲ (၂၆ ချက် ရှိပါတယ်။ တစ်ချက်ချင်း ဖေါက်သည်ချပါ့မယ်)
Emotionally Mature တဲ့ဗျ။
၁။ ခပ်ညစ်ညစ်၊ ဆိုးပေတဲ့ လူတွေကိုတွေ့ရင် သူတို့ဟာ ဆိုးလိုက်တဲ့ကောင်၊ မိုက်ရိုင်းလှတဲ့လူတွေ ပါလားလို့ မြင်တာကိုကျော်လွန်သွားပြီး သြော် သူတို့ရဲ့ပူပန်မှု၊ ကြောင့်ကြမှုနဲ့ အကြောက်တရားကသာ အဓိက (အခြေတည်တာ) ပါလား လို့မင်းသဘောပေါက်တဲ့အချိန်။
ငါမှအမှန် ငါမှအကောင်းဆိုတာကိုလည်း ဆုပ်ကိုင်မထားတော့သလို တစ်လောကလုံး ငရူးတွေ၊ လူယုတ်မာတွေပါပဲဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးကိုလည်း ရပ်ပစ်လိုက်နိုင်ပြီ။
အစတော့ အဖြူ၊ အမည်းကွဲပြားမှုကို အနည်းအကျဉ်းတော့ရှိနေနိုင်ပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ လူ့သဘော လူ့မနောတွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာအရမ်းကောင်းလာတာမျိုး ဖြစ်လာပြီ။
Emotionally Matured ဖြစ်ပြီလို့သိနိုင်မယ့်အခြေအနေ။
(၂) ။ ကိုယ့်အတွေးထဲမှာ ဘာရှိနေလည်းဆိုတာ တခြားလူတွေက အလွယ်တကူတော့ ဘယ်နားလည်ပါ့မလည်းလို့ မင်းကောင်းကောင်းသိနားလည်တဲ့အချိန်။ တခါတလေ မင်းဘာကို ရည်ရွယ်တယ်၊ မင်းဘာကိုဆိုလိုတယ် ဆိုတာကို စကားလုံးတွေအမျိုးမျိုး သေချာသုံးပြီး ရှင်းပြမှကို ရတော့မယ်လို့ မင်းနားလည်လိုက်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုး။
ကံအကြောင်းမလှစွာဘဲ မင်းဆိုလိုတာကို သဘောမပေါက်သွားတဲ့ (မမိသွားတဲ့) သူတွေကို ဒီလောက်လေးတောင် မပေါက်ဘူးလားကွာလို့အပြစ်တင်မစောဘဲ စိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ သူတို့ ကောင်းကောင်းနားလည်အောင် သေချာပြောပြမှကို ဖြစ်တော့မှာကိုး၊ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလည်းလို့ မင်း ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမျိုးပါတဲ့။
[ဒီလို စိတ်ရှည်ပြီလား၊ ကိုယ့်စိတ်ကူးကို သူများဘယ်သိပါ့မလဲ ဆိုတာကိုလက်ခံပြီလား]
Emotionally mature ဖြစ်တာ သိနိုင်ပြီလား။ မနေ့က အိမ်စာမလုပ်လိုက်ရတာတောင်းပန်ပါတယ်။
(၃)။ ကိုယ်လုပ်တာတွေလည်း မှားတဲ့အခါလည်း မှားမှာပဲပေါ့လို့မင်းဟာ သင်ယူတတ်လာပြီ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း တောင်းပန်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးကို လေးဖင့်တွဲတွဲခြေလှမ်းကို လှမ်းပြီး “ဘယ်တတ်နိုင်မလည်း တောင်းပန်ရတော့မှာပေါ့”ဆိုတာမျိုးကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ မင်းလုပ်ရဲပြီ။
Emotionally mature ဖြစ်ပြီလား?
(၄)။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆရာကြီးပဲလို့ (အကောင်ပဲလို့) သဘောပေါက်တာမျိုးနဲ့ မဟုတ်ဘဲ အခြားလူတွေလည်း ကိုယ့်လိုပဲ အူကြောင်ကြောင်နိုင်တာ၊ နုံတာ၊ ကြောက်တတ်တာ၊ ဘာမှန်းမသိတော့တာ ဖြစ်တာပါပဲလို့သိနားလည်ပြီး ယုံကြည်မှုရှိအောင် သင်ယူတတ်ပြီ။ ဒီလိုပါပဲ၊ အားလုံးဟာ ဒီလိုပဲ အူတဲ့အခါလည်းအူ၊ ဒူတဲ့အခါလည်းဒူကြမှာပေါ့လို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလက်ခံနိုင်ပြီ။
ဒီအပိုင်းကတော့ Confidence ရှိလာတာကို ဘဝင်ဟပ်ပြီး မြှောက်ကြွကြွဖြစ်တာမျိုးနဲ့ မဟုတ်ဘဲကိုယ်လည်း မှားနိုင် အူကြောင်ကြောင်နိုင်တာပဲလို့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ နဲ့စိတ်ထားတတ်လာတာ။
Emotionally mature ဖြစ်တာသိနိုင်ပြီလား နံပါတ် ၅ ရောက်ပါပြီ။ Imposter syndrome ဆိုတော့ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ ဘာများလည်းမှတ်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလျှော့တွက်တဲ့၊ မယုံကြည်ရဲတဲ့ စိတ်မလုံမခြုံဖြစ်မှုလက္ခဏာတွေပါ။
Imposter အကြောင်းလေး ဖေါက်သည်ချချင်တယ်၊ မသိသေးဘူးဆိုသူတွေ အတွက်ပါ။ ကျတော်တို့ သင်တန်းတွေမှာ စ,နောက် လေ့ရှိတဲ့ အပေါ်ကြွားနဲ့ အောက်ကြွားဆိုတာထဲက အောက်ကြွားလိုဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ “ကျတော်တကယ်မတော်ပါဘူး၊ စာလည်း ဘာမှကြိုးစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အဆင့် (၁) ရသွားလည်းတောင် မသိပါဘူးဗျာ” လို့ပြောရင် ကျတော်တို့က နောက်လေ့ရှိတယ်လေ။ ဒါ အောက်ကြွားလို့။
ဒါပေမယ့် အချို့လူတွေမှာ ဘယ်လောက်ပဲအောင်မြင်မှုတွေ တစ်သီကြီးပြည့်နေပါစေ သူ့စိတ်ထဲမှာ လုံခြုံမှုကို မရနိုင်နေဘူး။ စာတွေလုပ်ထားတယ်၊ အစမ်းစာမေးပွဲတွေမှာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ဖြေကြည့်တာ အမှတ်တွေကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် လာမယ့်စာမေးပွဲ အတွက်ကတော့ စိတ်တွေအရမ်းပူပန်နေတာပါပဲ။ အချို့က အောင်မြင်မှု အထိုက်အလျောက်ရရှိ ထားပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့် ရထားတာတွေဟာ ငါကံသီလို့ရတာပဲနေမှာရယ်၊ တကယ်တော်လို့ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါလို့ စိတ်ထဲကတွေးနေပြီးမယုံကြည်ရဲဘူး။ အချို့ကတော့ အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခဲ့ပြီ၊ ပေးဆပ်ခဲ့ပြီ၊ အခုရရှိလာတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ခံစားခွင့်တွေကို ရရှိခံစားရတာကို စိတ်မလုံနေဘူး၊ ငါဒီလောက် ရသင့်ရဲ့လား၊ ငါကအခွင့်အရေး ယူလွန်းသူ ဖြစ်နေပြီလား၊ ငါက သူတော်ကောင်းမှ ဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတာမျိုးတွေ တွေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရမ်းလျှော့တွက်လွန်းတာ (ဒီနေရာမှာ နှိမ့်ချတတ်တာကို ကျတော်တို့ ယဉ်ကျေးမှုကတော့ ကောင်းတယ်လို့သင်ထားပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက confidence မရှိနေတာမျိုးပါ)။ သုတေသနအရတော့ အရမ်းအောင်မြင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ်တယ်တဲ့။ ငါလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမထားနိုင်ဘူး၊ မရရင်လည်း ငါအရမ်းညံ့တာပဲလို့ ယူကြုံးမရတွေဖြစ်တတ်တယ်။
No.5 ကတော့ ဘဝမှာ ဘယ်သူမှ တရားသေ တော်လိုက်တာ၊ ကောင်းလိုက်တာ ဆိုတာ အာမခံနိုင်တာမျိုး မရှိပါဘူးလို့ လက်ခံနိုင်လာတဲ့အတွက် မင်းမှာ Imposter လက္ခဏာတွေ ခံစားရတာ မရှိတော့ဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ (အနည်းနဲ့အများပဲကွာမယ်) နေရာတစ်ခုခုမှာတော့ ဝင်ရောက် “က” ပြ အသုံးတော်ခံဖို့ (အစွမ်းပြနိုင်ဖို့) အတွက် ကြိုးစားနေကြတာပါပဲ။ သူတို့မှာလည်း ကပေါက်တိကပေါက်ချာနိုင်တာ၊ အလွန်းခေါင်းမာပြီး အပေအတေနိုင်တာ တွေရှိမှာပေါ့၊ ဒါတွေကို အတင်းမြောင်းထဲသွားသွန်လိုက်၊ ဘေးချိတ်ထားလိုက်နဲ့ ကြိုးစားနေရင်းပဲပေါ့။ ဒီလိုလက်ခံလာပြီဆိုရင်တော့ ရင့်ကျက်လာပါပြီ တဲ့ဗျ။
စာပိုဒ်လေးကတိုပေမယ့် imposter syndrome ကို ရှင်းစေချင်လို့ ပေရှည်လိုက်တာပါဗျ။
Emotionally Mature ဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ဖို့ အမှတ်စဉ် ၆ ပါ။
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ မင်းကိုလူဖြစ်လာစေတာ မင်းကို ဒုက္ခပေးချင်လို့၊ စော်ကားဖို့မှ မဟုတ်ပဲလို့ သဘောပေါက်နားလည်တဲ့အတွက် မိဘတွေကို မင်းက နားလည်ခွင့်လွှတ်လိမ့်မယ်။ သူတို့လည်း ဒုက္ခလှိုင်းလုံးတွေ၊ ဆိုးရွားခါးသီးမှုတွေနဲ့ သတ်ပုတ်လူးလှိမ့်ခဲ့ရတဲ့ နာကြင်မှုတွေဟာ အတော်နက်ရှိုင်း မှာပါပဲ။ အခြေအနေတစ်ချို့မှာတော့ “ဒေါသ”ဟာ “သနားကရုဏာ”နဲ့ “ချစ်ခြင်းမေတ္တာ”ဖက်ဆီသို့ ဦးလှည့်သွားတတ်တယ်။
စိတ်တိုစရာတွေ့ပေမယ့် ဒီလိုပြန်ဆင်ခြင်ပြီး ဒေါသစိတ်ကနေ သနားစိတ်တွေနဲ့ မေတ္တာ အဖြစ်ပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်ပြီလားပေါ့။
ဒါဆို နံပါတ် ၆ မှာရသွားပါပြီ။
ဒါလည်း အရေးကြီးတာပဲ။ Emotionally Mature (7) ရောက်ပါပြီ။
အိပ်ယာပေါ်က ကိစ္စကြောင့်၊ သွေးထဲက သကြားဓါတ်ကြောင့်၊ အရက်ကြောင့်၊ အဲဒီတုန်းက စိတ်ဖိစီးမှုနောက်ခံရှိနေတာကြောင့်ဆိုတဲ့ ဘာမဟုတ်တဲ့အသေးအမွှားလေးတွေပါ ဆိုတဲ့ ပယောဂတွေကလည်း အကြီးအကျယ် လွှမ်းမိုးသက်ရောက်တတ်ကြောင်း မင်းသိလာပြီ။
ဒါရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့သာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင် အရေးကြီးပြီး ထိရှလွယ်တဲ့ ပြဿနာမျိုးကို မင်းဟာ ဘယ်တော့မှ ခပ်လွယ်လွယ် ကောက်မကိုင်ဘူး။ စိတ်လိုက်မာန်ပါ မရှင်းဘူး။ ကိုယ်အပါအဝင် အခြားသူတွေ အားလုံးက ကောင်းကောင်းအနားယူထားရဲ့လား (သက်သောင့်သက်သာရှိနေတဲ့အနေအထား)၊ ဘယ်သူမှ အရက်မူးနေတာ (သောက်ထားတာ ရှိမနေတာ) သေချာရဲ့လား၊ အစာလည်း အချိန်မီစားထားရဲ့လား (ဗိုက်ဆာရင်လည်း ဒေါသပိုထွက်လွယ်တတ်တယ်)၊ ဘယ်အရာကမှ ကိုယ့်ကို အရမ်းသတိပေးနေတာ၊ ခြိမ်းချောက်နေတာမျိုးမရှိဘူး၊ တစ်ခုခုကို လုပ်ဖို့ လောနေရတဲ့အချိန်မျိုး၊ ဂယက်ထနေတဲ့အခါမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတာသေချာမှ မင်းဟာ ဒီလို သိမ်မွေ့ထိရှိလွယ် ကိစ္စတွေကို သေချာ ခေါင်းအေးအေးနဲ့ ဖြေရှင်းမှရမယ် လို့ သိနားလည်သွားပြီဆိုရင် နံပါတ် (7) အရ ရင့်ကျက်လာပါပြီ တဲ့။
ဒီနေ့တော့ Emotionally Mature ဖြစ်တာ သိနိုင်ပြီလား အမှတ်စဉ် (၈) ရောက်ပါပြီ။
ကိုယ်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးသူတွေက ကိုယ့်ကို အကြပ်ကိုင်လာရင်၊ ကွိုင်ရှာလာရင်၊ ဆော်မယ်တီးမယ် လုပ်လာပြီဆိုရင် တကယ်တော့ သူတို့ဟာ မင်းကို တကယ်ပဲရန်ရှာချင်လို့၊ မင်းကို ညစ်ချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုခံချင်လို့ သူတို့ လုပ်တတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ပဲ လုပ်ပြနေတာပဲဖြစ်မှာပါလို့ မင်းသဘောပေါက်လာပြီ။
အခြေနေမကောင်းတဲ့ သူတို့အပြုအမူတွေရဲ့နောက်ကွယ်က စိတ်အားငယ်မှု အခြေနေတွေကို မင်းကထောက်လှမ်း မှန်းဆတတ်လာပြီ။ သိပ်လှတဲ့တစ်နေ့မှာတော့ ခင်မင်သူတွေကို တစ်ဖက်သတ်ဝေဖန်အကဲဖြတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သူတို့အခြေအနေကို ခင်မင်ရင်းနှီးစွာပဲ ကိုယ်ကဘာသာပြန်နိုင်လာပြီဆိုရင်တော့ Emotionally Mature ဖြစ်လာပြီတဲ့။
Emotionally Mature No9ပါ။ ခက်လာသလိုလို။။။
အလိုမကျတဲ့အခွက်နဲ့ မှုန်သိုးသိုးကြီးလုပ်နေတာမျိုးကို တွေစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ။ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို ထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်ရင်တောင်မှ အမုန်းအညှိုးတွေနဲ့ ဒါဏ်ရာတွေကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမထားဘူး။ မင်းလည်းလူ့ပြည်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာနေနိုင်မှာ သေချာနေလို့လဲ။ ဘာမှားနေတာပါဆိုတာမျိုး အခြားလူတွေကို သိစေချင်လွန်းတာတွေ သိပ်မပြင်းပြတော့ဘူး။ ဒဲ့ပဲပြောတယ်၊ ရရင်လည်း ရပေါ့၊ မရလည်း ခွင့်လွှတ်တယ်။ ကိုယ်ပြောသလိုမဖြစ်ဘဲ အခြားပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားရင်လည်း “အင်းပေါ့လေ၊ ဒီလိုဆိုတော့လည်း ဒီလိုပေါ့” လို့ လက်ခံခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီတဲ့။
Emotionally Mature ဖြစ်ပြီလား အမှတ်စဉ် (၁၀)
ဘဝက တိုတိုလေး။ ကိုယ်ဘာပြောချင်တာလည်း၊ ကိုယ်ဘာကိုအဓိကထားချင်နေတာလည်း ဆိုတာကို သေချာပြောဖို့ မင်းအတွက်အလွန့်အလွန်အရေးကြီးတယ်။ မင်းဂရုစိုက် နေရတဲ့အရာတွေဟာ မင်းအတွက်အရမ်းအရေးပါတယ် ဆိုတာတွေကို ပြောပြဖို့လိုတယ် (ဖြစ်နိုင်ရင်နေ့တိုင်းပေါ့)။ ဒီလို မင်းကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်လာပြီ တဲ့။
Emotionally mature ဖြစ်တာသိနိုင်မယ့်အကြောင်း (၁၁)ပါ။ မနေ့က အိမ်စာမလုပ်လိုက်ရလို့ ဒီနေ့ ၂ ပိုင်းတင်ပါတယ်။
အရာတိုင်းမှာ ပြောစရာမရှိလောက်အောင်ခြောက်ပြစ်ကင်းပြည့်စုံကောင်းမွန်နေမယ်လို့ တွေးထင်တာမျိုးတွေမင်း ရပ်တန့်လိုက်ပြီ။ လုံးဝပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူ၊ အလုပ်၊ ဘဝရယ်လို့ တကယ်မရှိဘူး။
ဒီလောက်ဆိုရင် မဆိုးဘူး၊ အတော်ကောင်းတယ် ဆိုတာမျိုးပဲ အသိမှတ်ပြုတာရှိမယ်။ မင်းရဲ့ဘဝမှာ အချို့အရာတွေက အတော့်ကိုစိတ်ပျက်စရာတွေရှိနေပေမယ့် အချို့အပိုင်းတွေကျတော့လည်း တော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေတာမျိုးလည်းရှိတာပါပဲ လို့ မင်းတကယ်သိနားလည်သွားရင်တော့ တဲ့။
Emotionally Mature ဖြစ်ပြီလား သိနိုင်မယ့် No 12 ကတော့ . . .
အချို့သောအရာတွေ ပြောင်းလည်းသွားတတ်တာကို နည်းနည်းတော့ အလျှော့ပေး လိုက်လျောလက်ခံတတ်တာလည်း တစ်ခါတစ်လေကောင်းတာပဲလို့ မင်းသဘောပေါက်လာပြီ။ ပိုပြီးတည်ငြိမ်လာတာ၊ စိတ်ရှည်လာတာ၊ ခွင့်လွှတ်တဲ့စိတ်နှလုံးအားကောင်းလာတာ တွေဖြစ်လာမယ်။ ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်ကို တင်းတင်းကြီးဆုပ်ကိုင်မထားတော့ဘူး။ ခေါင်းမာမာ၊ ကြွပ်ဆတ်ဆတ်၊ ရှုးရှုးရှဲရှဲ ဝိုင်းဒိုင်းကျဲတာတွေ လျော့လာမယ်။
Emotionally Mature ဖြစ်တာသိနိုင်မယ့် အမှတ်စဉ် (၁၃) ပါ ခင်ဗျ။
လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေဟာလည်း အားသာချက်တွေနဲ့ ပြန်လည် ဖြည့်စွက်ချိန်ထိုးနေတတ်တဲ့ ဆက်စပ်မှုသဘောတရားတွေကို မင်းသိမြင်လာပြီ။ အားနည်းချက်ကိုပဲ ကွက်ကြည့်မနေဘဲ တစ်ခုလုံးခြုံကြည့်တတ်လာမယ်။ ဒီလူကဖြင့် ဒီနေရာမှာ အတော့်ကို ပုံမလာပေမယ့်လည်း အချို့သောဂယက်ထတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ အရမ်းကို အားထားရပြန်ရော ဆိုတာမျိုး။ တစ်ချို့က ပရမ်းပတာနိုင်ပေမယ့် အတွေးအမြင်စူးရှတာ၊ ပြောင်မြောက်အောင်တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်စွမ်းရှိတာ။ ဒီလို နားလည်လက်ခံလာတဲ့အတွက် ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလည်းစင်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုတာကို မင်းတကယ်နားလည်သဘောပေါက်ပြီး အားသာချက်တိုင်းမှာလည်း အားနည်းချက်တစ်ခုခုနဲ့တော့ ချိတ်ကပ်ပါလာတတ်တာကို သိပြီ။
eMoTiOnAlLy MaTuRe? No 14 ပါဗျ။
ညှိနှိုင်းစေ့စပ်ဖြေရှင်းရတဲ့တန်ဖိုးကိုမင်းနာလည်ပြီ။ တချို့အခြေအနေမှာ ခဏလောက် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အနည်ထိုင်ဖို့လိုတတ်တာ နားလည်ပြီ။ ငါက အားနည်သူမဟုတ်ဘူး၊ ရင့်ကျက်ပြည့်ဝတာလို့ မင်းကိုယ်မင်းအသိမှတ်ပြုနိုင်ပြီ။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အတူနေတယ်ဆိုတာ ကလေး (ရင်သွေး) လိုချင်တာကြောင့်လို့မင်းကပြောချင်ပြောလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဘဝကို တစ်ယောက်ထဲမဖြတ်သန်းရဲတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
အဖုအထစ်တွေ၊ ပွတ်တိုက်မှုတွေနဲ့ ကောင်းကောင်းယဉ်ပါးနေပြီ။ စွန့်စားမှုကင်းတဲ့ဘဝဆိုတာမျိုးက ပုံရိပ်ယောင်ပါပဲလို့ မင်းသိပြီကိုး။
Emotionally Matured? No.15
မင်းဟာ လွယ်လွယ်တော့မချစ်မိတော့ဘူး။ ခက်တော့လည်း ခက်ပေသားလား။ ငယ်တုန်းကတော့ မြင်မြင်ချင်းပဲ ကြွေဆင်းရတာတွေဘာတွေပေါ့လေ။ ခုတော့ နာကြင်စွာလို့ပြောရမလား၊ နောင်ကြဉ်စွာလို့ပဲ ပြောရမလားပဲ။ လူတစ်ယောက်ဟာ အပြင်မှာတော့ အရမ်းကို ချစ်ရာကောင်းပြီး ပြီးပြည့်စုံတော့မလိုပဲ ထင်ရပေမယ့် နီးနီးကပ်ကပ်ပေါင်းကြည့်တော့ နာကြင်ရတာတွေလည်း ရှိတတ်တာပဲလို့ မင်းသတိရှိလာပြီ။ မင်းမှာရှိပြီးသား (သူ့) ကိုပဲ သစ္စာပိုရှိဖို့ ဖြစ်လာတယ်။
(ဒါတော့ အီဖေကိုယ်တို့နဲ့ သိပ်မဆိုင်ဘူးပေါ့လေ။ ကိုယ့်အချစ်က အဲလောက်လွယ်လွယ်မှမဖြစ်တာ။)
Emotionally Matured? No.16
အံ့သြစရာပါပဲ။ တကယ်တမ်းသေချာဆန်းစစ်ကြည့်တော့ မင်းကလည်း အတော့်ကို ပေါင်းရသင်းရ ခပ်ခက်ခက်လူတစ်ယောက်ဆိုတာ မင်းကိုယ်တိုင်သိပြီ။ ဖီးလ်လာမှ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းတင်လွန်းခဲ့ဖူးတဲ့အကျင့်တွေ ခြွေချနေပြီ။
စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုခုကို ရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတာမျိုးကို၊ ဘယ်ချိန်မှာ ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဆိုတာမျိုးကို အခြားသူတွေကို သေချာဂရုတစိုက် အသိပေးပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို သေသေချာချာ တည်ဆောက်တော့မယ်။
Emotionally Matured ဖြစ်ပြီလား (17) ရောက်ပါပြီ။
ကိုယ်မိုက်ရူးရဲဆန်ခဲ့တာတွေ၊ အမှားတွေအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်တတ်လာပြီ။ အတိတ်ကအမှားအချို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်ပေးနှိပ်စက်တာမျိုးတွေဟာ ဘာမှ အကျိုးမရှိတာ သိလာပြီ။ မိမိအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်ကပဲ သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်ရမှာပေါ့။ မင်းဟာ ငတုံး၊ ငကြောင် တစ်ယောက် (အရှုပ်ထုပ်) ဖြစ်တယ်ပဲထားပါအုံး၊ အခြားလူတွေလိုပဲ မင်းဟာ ချစ်စရာကောင်းသူတစ်ယောက်ပဲလေ (ချစ်စရာအကွက်တွေရှိတယ်ပေါ့)။
Emotionally Mature ဖြစ်ပြီလား အမှတ်စဉ် ၁၈ ပါ။
ရင့်ကျက်လာတယ်ဆိုတဲ့အစိတ်အပိုင်းထဲမှာမှ ခေါင်းမာမာ၊ ဂျစ်ကန်ကန် ကလေးဆန်တဲ့ စရိုက်လေးတော့ဖြင့် ကိုယ့်မှာကျန်နေတတ်တာကိုသိပြီး အဆင်ပြေပြေနေတတ်အောင် နေဖို့သိနားလည်ပြီ။ နေရာတကာမှာ လူကြီးလုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာမျိုးမရှိတော့ဘူး။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းမှုတွေဟာ လူတိုင်းမှာ ရှိကြတာပဲလို့ လက်ခံပြီ။
မင်းလိုလားတဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေကို နှစ်များစွာရှည်ကြာဖို့ ဘယ်လိုတွေလုပ်လိုက်မယ်ဟဲ့ ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေအပေါ်မှာ အရမ်းမျှော်လင့်ချက်ထားမိတာတွေ ရပ်သွားပြီ။ သေးသေးမွှားမွှားပဲဖြစ်ပါစေ၊ အဆင်ပြေချောမွေ့သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ ဒါဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရမှာ။ စိတ်ကျေနပ်မှုဆိုတာမျိုးကလည်း တရိပ်ရိပ်နဲ့အတိုးတက်နေသလိုပါပဲလို့ မင်းသဘောပေါက်လာပြီ။
ဒုက္ခမများလိုက်ဘဲ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားရတာကိုက “အိုး . . . ဒီနေ့အတွက် အတော်လေးကို အဆင်ချောသဟ”လို့ ဝမ်းမြောက်ရပြီ။ ပန်းတွေရဲ့အလှမှာ နစ်မြောလာတတ်သလို ညနေဆည်းဆာရဲ့ကောင်းကင်ပြင် အခင်းအကျင်းကိုလည်း သဘောခွေ့တတ်ချေပြီ။ သာမာန်သာဟာမှုလေးတွေကိုပင် အရသာတွေ့နေလေပြီ။
ဒါဟာ Emotionally Matured ဖြစ်ပြီဆိုတာသိနိုင်မယ့် No.19 ပင်ဖြစ်သည်။
Emotionally Matured ဖြစ်ပြီလားသိနိုင်မယ့် No.20 ပါ။ (အကြွေးတင်သွားလို့ စုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်)
လူတွေမင်းကိုဘယ်လိုမြင်မလဲ ဆိုတဲ့ စိုးရွံ့မှုတွေမရှိတော့ဘူး။ လူတွေရဲ့စိတ်က အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေစေတာလေ။ ဆိုတော့ လူတိုင်းရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ မင်းရဲ့ပုံရိပ်လှစေဖို့ အရေးလုပ်ပြီး ကြိုးစားပမ်းစား မလုပ်တော့ဘူး။ မင်းကမင်းအတိုင်းပဲဖြစ်နေတာကို မင်းနဲ့ အခြားသောမိတ်ဆွေတစ်ယောက် နှစ်ယောက်လောက်က အိုကေနေတယ်ဆိုရင် စိုပြေပြီပေါ့။ ကြော်ဇောချင်တာတွေ စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး ချစ်မေတ္တာအပေါ်သာ ဂရုပြုအားထားတတ်ပြီ။
Emotionally Matured ဖြစ်ပြီလား 21 ပါ။
Feedback တွေ နားထောင်ရတာပိုအဆင်ပြေလာတယ်။ ကိုယ့်ကိုဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့လူ အပေါ်မှာ ဒါငါ့ကို သက်သက်အရှက်ခွဲတာ (သို့မဟုတ်) ဒီလူမဟုတ်တာတွေပြောနေတာ လို့သတ်မှတ်နေမယ့်အစား ဒါလည်းပဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားသင့်တဲ့ အချက်ထဲတော့ ပါတာပဲလို့ လက်ခံတတ်ပြီ။ ဝေဖန်စောကြောမှုကို နားထောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီ၊ ခံနိုင်ပြီ။ ဘာ ပြဿနာမှမရှိဘူးလို့ ငြင်းဆိုတာမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ပဲကြိုးစားတာမျိုး မလုပ်တော့ဘူး။
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ သဘောပေါက်လာတာက ပြဿနာတွေ အရှုပ်ထုပ်တွေကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် အစွမ်းအစတွေပြည့်နေတဲ့ အတိုင်းအထွာလောက်ထိတော့ နေနိုင်ကောင်းရဲ့ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုနာကျင်စေတဲ့ အရာတွေအပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့ လိုမှာပေါ့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရှိဖို့ ပိုပိုပြီး သတိရလာတယ်။ သဘာဝရှုခင်းတွေထဲ လမ်းလျှောက်ရတာ ကြိုက်လာတယ်။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးမွေးချင်မွေးမယ်။ ညအခါ လင်းလက်နေတဲ့ နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီက ကြယ်တွေဖွေးဖွေးလှုပ်နေတာကို ကြည်နူးခံစားမိမယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ Emotionally Matured ဖြစ်ပြီလားပေါ့။ No.22 ပါဗျ။
လူတွေရဲ့ မကောင်းတဲ့စရိုက်တွေကမင်းကို လွယ်လွယ်တော့မလွှမ်းမိုးတော့ဘူး။ စိတ်တွေ မောဟိုက်တုန်ရီပြီး ဇောက်ထိုးမဆင်းခင်မှာပဲ သူတို့ဆိုလိုချင်တာ တကယ်တော့ ဘာဖြစ်မှာပါ ဆိုတာကိုတွေးဆ တတ်လာမယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ပြောလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ သူဘာကိုဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကယူဆလိုက်မိတာ (နားလည်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူးနော်) ရဲ့အကြားမှာ အချိတ်အဆက်ပြတ်တောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာပြီ။
ဒါလည်း emotionally matured ဖြစ်တာသိနိုင်မယ့် လက္ခဏာပဲ။ No.23 ပါ။ ကုန်ပါတော့မယ်။ အားပေးနေတဲ့ ပြိတ်သတ်ကြီးကို ကျေးဇူးပါဗျ။
နောက် ၃ ရက်ဆို ကျတော်တို့ရဲ့ ဆင်ခြင်တုံစခန်းသွင်း ၂၆ ရက် ပြည့်ပါတော့မယ်။ ဒါတွေကို အစအဆုံး ဖတ်ပြီး ဆင်ခြင်ခဲ့ရင်သိပ်ကောင်းပါတယ်။
Emotionally Matured? No.24 ပါ။ အားတင်းထားပါ။
မိမိဘယ်လိုတုန့်ပြန်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အမူအကျင့်ဟာ ထူးခြားတဲ့အတိတ်ကအရိပ်ဟောင်းရဲ့ အရောင်ဆိုးတာတွေ အများကြီးခံရတာပေါ့လို့ မင်းနားလည်လာပြီ။ ကိုယ်လုပ်လိုက်လို့ ပျက်စီးထိခိုက်ရတာတွေအတွက်လည်း မင်းပြန်ပေးဆပ်ရမယ် ဆိုတာသင်ယူတတ်ပြီ။ ကလေးဘဝမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကြောင့် အချို့အခြေနေတွေမှာ ပုံကြီးချဲ့တတ်တာလည်း မဆန်းဘူး။ (မီးလောင်ဖူးတဲ့ကလေးက ပြာဆိုရင်ကို မကိုင်ရဲတော့တာမျိုး၊ ကျတော်က ဓါတ်လိုက်ခံရဖူးတော့ ပလပ်ပေါက်တွေဆိုမီးပတ်ထားတောင် မကိုင်ရဲဘူး။ အချို့က မှောင်ရင် ကြောက်နေတော့တာမျိုးပေါ့။ နားမလည်မှာစိုးလို့ လျှာရှည်လိုက်သည်)။ အချို့အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်တွေကြားတာနဲ့ ရင်တုန်သွားတတ်တာမျိုးတွေကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သံသယဖြစ်လာတတ်တယ်။ (ဒါမျိုးကြားတာနဲ့ ငါက ဘာဖြစ်ရတာပါလိမ့်ပေါ့။ ဥပမာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတရားကျူးလွန်ခံရသည် ဆိုတာမျိုးကြားတာနဲ့ ဆန်းဆန်းတင့်သွားတာမျိုးဟာ ငယ်တုန်းက ကိုယ်လည်း မနှစ်မြို့တဲ့အတွေ့အကြုံမျိုး ကြုံရဖူးထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့)
တခါတလေ ကိုယ့်ခံစားချက်အတိုင်း အလိုလိုက်စီးမျောမသွားဖို့ သတိရတယ်။
နောက်ဆုံးရဲ့ ဒုတိယအပိုဒ်ပါ။ Emotionally Matured No.25 တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ပြီလား။
မိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးမှာ တကယ်တော့ အခြားသူတွေဟာ မင်းရဲ့ကောင်းသတင်းတွေကို အခြေခံအားဖြင့်တော့ သိပ်စိတ်ဝင်စားလှတယ်လို့မဟုတ်ဘဲ မင်းကို ဘယ်အရာ တွေကများ ဒုက္ခတွေပိစေပါလိမ့်၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေပေးနေပါလိမ့် လို့သိချင် နားလည်ချင်ပါလိမ့်မယ် ဆိုတာကို မင်းသဘောပေါက်ပြီ။ ဒါမှလည်း သူတို့ကလည်း အထီးကျန်ဆန်တဲ့ ဝေဒနာတွေ သက်သာမယ်လေ။ အော် ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး၊ သူလည်း ဒုက္ခအပူနဲ့ပါလားလို့မြင်ပြီး နားလည်းပေးနိုင်မှာကိုး။
မိတ်ဆွေဆိုတာ တကယ်တော့ ဒုက္ခတွေ အားငယ်မှုတွေကို မျှဝေခံစားတာလို့သိမြင်လာပြီဖြစ်လို့ မင်းလည်း မိတ်ဆွေကောင်း သူငယ်ချင်း ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါပြီ။
နောက် ၂ ရက်ဆို ပြီးပါပြီ။
တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ပြီလား နောက်ဆုံး အပိုဒ်ပါဗျ။ ၂၆ ရက်ပြည့်ပါပြီ။ certificate ပေးတော့မယ်။
အရာရာကို ကောင်းသွားမှာပါလေ ဆိုပြီး ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပြန်နှစ်သိမ့်တာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ငြိမ်းသက်အောင်လုပ်တတ်ရမယ်ဆိုတာကို သင်ယူလာပြီ။ အခြေနေတိုင်းမှာတော့လည်း အလုပ်မဖြစ်ဘူးပေါ့။ မှားတာတွေလည်းမှားမှာနေပဲ၊ ဒါပေမယ့် သူ့ဟာနဲ့သူလည်း ဖြစ်သွားမှာပဲလို့တွေးဆတတ်တဲ့စွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်ထားပြီ။ ကျယ်ပြောတဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးမယ် ဒီလိုမဟုတ်ရင် ဟိုလိုပေါ့ဆိုတဲ့ရွေးချယ်စရာ ရှိတတ်စမြဲ။ ကြင်နာ သနားတတ်တဲ့ နှလုံးသားအချို့လည်း ထွေးပွေ့ဆုံတွေ့ရနိုင်သလို နောက်ဆုံးမှာတော့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအခြေအနေတွေကို တောင် ဒူပေနာပေ (ခံနိုင်ရည်) ရှိလာ သလိုလို ဖြစ်တတ်တွေ ကို သဘောပေါက်လက်ခံနားလည်လာပါပြီ။
Emotionally Matured ဖြစ်ပြီလား သိနိုင်မယ့် ၂၆ ချက် အဆုံးသတ်ပါ။ အားပေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ကျေးဇူးပါ။
Emotional maturity နဲ့ပါတ်သက်ပြီး အားနည်းတဲ့ လက္ခဏာ ၃ ချက်ကို အနည်းဆုံးကနေ ၃ ဆင့်ထိပြောခဲ့ပြီးတော့ အခု ကောင်းတဲ့ဖက် ၃ ဆင့်ကို ပြောပါတယ်။
အဲဒီမေးခွန်းပါပဲနော်။ ရှေ့က ပို့စ်ကို ပြန်ဖတ်ပါနော် ရှည်မှာစိုးလို့။
ပထမတစ်မျိုးကတော့ ရှင်းပြနိုင်စွမ်းရှိတာပါ။ ကိုယ့်ကိုစိတ်ပျက်အောင်လုပ်တဲ့လူကို ဘာလို့သူ့ကိုစိတ်ပျက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြနိုင်ဖို့ဆိုတာ ပါးပါး ပြောရတာလွယ်မလိုနဲ့ တကယ်လက်တွေ့များများလုပ်ကြည့်မှ ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာဗျ။ ဒါလည်း စွမ်းအားတစ်မျိုးပဲ။ ပြောရမယ့်စကားလုံးရှာတွေ့ဖို့လည်း ယုံကြည်မှုရှိရမယ်၊ ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ စိတ်ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါတယ် ၊ သနားဖို့ ကောင်းပါတယ်လို့ ပြောဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ ကံကောင်းစွာနဲ့စကားလုံးရှာတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကလေးလေးနက်နက် သတိတရရှိနေရမယ့်လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို နားလည်သွားစေမယ့် မြင်စေမယ့်စကားလုံးမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်။ အခုလို စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားနေရတဲ့ အချိန်မျိုး မှာတောင် ကိုယ်သိနားလည်နေရမှာကတော့ ဒီလူဟာ ကိုယ့်ရန်သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ (အားပါး တော်တော်မြင့်လာပြီနော်)။ တော်တော်ရင့်ကျက်လာပြီ ဒါဆို။
အနှစ်ချုပ်ပြောရင် သူ့ကို ဘာလို့စိတ်ဆိုးကြောင်းပြောလို့ရတယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်က သူ့ကို ရန်သူတစ်ယောက်လိုတော့မမြင်ဘူးဆိုတာကို သိသာစေမယ့် စကားမျိုး ကိုယ့်ကို သနားပါလို့ အချော့ခံချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ရ ဒါပေါ့နော်။
အဲလူတွေဟာ ကျနော့်လောက်တောင် ရှင်းပြီးပြတ်အောင်မရေးတတ်ကြဘူး။ စော်လိုက်အုံးမယ် author တွေကို ဟဟ။ ဒီနေ့တော့ မနေ့ကလို ဖြတ်ချရင် စိတ်ဆိုးကြမှာစိုးလို့ ပိတ်ရက်ဆိုတော့ ပြတ်အောင်ရေးပေးလိုက်ပါတော့မယ်။
ဒုတိယအဆင့်ကတော့ တည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ရင့်ကျက်မှုရှိတဲ့သူအတွက်ကတော့ မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တာကိုယ်က အခြေခံကျကျလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုအဖြစ်သိပြီးသားပါ။
ဒါကပဲသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုကောင်းကောင်းရှိနေစေတာမို့ ရုတ်တရက်အော်ဟစ်ငေါက်ငမ်းဆဲဆူပစ်လိုက်ဖို့မလိုဘူး၊ သံသယရဲ့အကျိုးဆက်ကိုအခြားလူတွေအပေါ်မပုံချလိုက်ဘူး၊ ဆိုးဆိုးရွားရွားတွေတွေးပြီးပူပန်သွားတာမျိုးတွေမလိုဘူး၊ ရုတ်တရက်သူများကို အားပြင်းပြင်းနဲ့ ပြန်နှက်ပစ်လိုက်မယ်ဟဲ့ ဆိုတာမျိုးလည်း မလိုအပ်ဘူး။
ရင့်ကျက်သူတွေအဖို့တော့ လူတိုင်းမှာ သူတို့ကိုလာပြီး ပျက်ရယ်ပြုအရှက်ခွဲဖို့၊ သူတို့ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးအောင်လုပ်ဖို့ အကြောင်းပြချက်တွေရှိနေမှာပဲလို့ သံသယမထားကြပါဘူး။
တတိယအဆင့်ကတော့ တစ်ယောက်ယောက်ကို နီးကပ်စွာပေါင်းသင်းပြီဟေ့ဆိုရင်တော့ တချိန်ချိန်မှာ နာကျင်မှုတွေပေးလာနိုင်ဖို့တံခါး ဟ ပေးလိုက်တာပါပဲလို့ ရင့်ကျက်သူတွေက နားလည်နေပြီ။
ဒီ idea လေးနဲ့တင် သူတို့က အေးဆေးဖြစ်နေပြီ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်အားနည်းချက် (ပျော့ကွက်) တွေကို ဘယ်လိုစိတ်ရှည်သည်းခံမှုမျိုးနဲ့ခရီးဆက် ရမလဲဆိုတာကို နားလည်လက်ခံနိုင်တဲ့ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးမျိုး ပိုင်ဆိုင်တဲ့အထိ အတွင်းအားတွေ ကောင်းနေပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်လှောင်ပြောင်ပျက်ရယ်ပြုနေတဲ့လူကိုတောင်မှ “မင်းမှာအကူအညီလိုနေပါတယ်” လို့ ပြောရဲတယ်။ သူတို့က ခံစားမှုပိုင်းမှာအတော်ပွင့်ပြီးသားဆိုတော့ တော်ယုံသူ့ကို အရှက်ရစေမယ့်ဟာမျိုးကတော့ မဖြုံပါဘူး။ (Emotionally naked ဆိုတာလေးတော့ သဘောကျမိတယ်။ ပွင့်တယ်ပေါ့)။
နောက်ဆုံးကွာ မျက်ရည်ကျရတယ်ဆိုအုံးတော့ အဲဒါ ဘာမှ မမှားဘူး။ ကိုယ့်ကို စိတ်ရှည်နိုင်မယ့်သူ နားလည်နိုင်မယ့်သူကို ရှာဖွေဖို့ကတော့ ဒါ ကိုယ့်အခွင့်အရေးပဲလေ လို့ယုံကြည်ထားတယ်။
ဒီ ၃ ချက်က Communication, Trust, Vulnerability ဆိုတဲ့ ဓမ္မထောက်တိုင် ကြီး ၃ ပါးပါပဲ။
ဒါတွေကို ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကလက်ဆောင်ရခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြီးလာမှ တဖြည်းဖြည်းသင်ယူလေ့ကျင့်ယူရတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကလေ ဘာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူ မလဲဆို ငယ်ငယ်လေးကတည်း English လိုပြောနေတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာကြီးလာရတဲ့ လူနဲ့ အရွယ်ရောက်မှ English ဘာသာစကားကိုတတ်အောင်သင်ယူနေရတဲ့လူနဲ့ ကွာသလိုတော့ရှိ မယ်တဲ့။ ဒီလို စိန်ခေါ်မှုကြီးတာပဲပြောတာပါ တကယ်တော့ ကိုယ်အခုဘယ်အဆင့်မှာပဲရှိတယ် ဆိုတာကအရေးမကြီးပါဘူး။ ကျတော်တို့ ၅၀% ကျော်လောက်ဟာလည်း emotionally matured ဖြစ်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာကြီးပြင်းခဲ့ကြတာဟုတ်ကြပါဘူး။ ကျတော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ emotionally matured ဖြစ်တဲ့ အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုတွေ နားယဉ်နေခဲ့တာမှမဟုတ်တာလေ။
ဆိုတော့ကား အသက်လေးတွေဘေးခဏချိတ်ထား၊ ကျောင်းပြန်သွားပြီး emotional adulthood ရဲ့ လှပဆန်းပြားသော သဒ္ဒါဗေဒ နဲ့ ဘာသာစကားတွေ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ ယုံယုံကြည်ကြည် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ နောက်ထပ် ၅ နာရီကနေ နာရီပေါင်း ၁ သောင်းတော့ သုံးဖို့ လိုကောင်းလိုမယ်ထင်ပါတယ်တဲ့ဗျ။
ဘိုကလေးတို့က level9လောက်တော့ရှိပြီးသား။
ကဲပါ အဆုံးသတ်ပါပြီ။ ကိုယ်က ဘယ်လိုတုန့်ပြန်တဲ့အထဲမှာလည်းသိပြီပေါ့။
မူရင်းဖတ်ချင်သူတွေ The Book of Life chapter 3: Self-knowledge ထဲမှာရှိပါတယ်လို့။
ဆရာဘိုဘိုလွင် (Bo) ရဲ့ နေ့စဉ်တင်တဲ့ ဆောင်းပါးကို တစ်စုတည်းဖတ်ချင်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကို ဆရာ့ကို ခွင့်မတောင်းဘဲ တင်လိုက်ပါတယ်။ ဖတ်မိရင်လည်း ဆရာ ခွင့်လွတ်နိုင်ပါစေ။